Midowga Africa oo mar kale ka hadlay xiisadda Somalia iyo Kenya - BANDHIGA
Lamaane Soomaaliyeed oo qoray Buugaag wax tar u leh caruurta Soomaalida. "Ma u dayaarisay caruurtaada noolasha berrito"-Ereyga Gudniinka Fircooniga Miyuu Dhab Ahaantii Soo Saarayaa Turjubaanka Saxda ah ee Gudniinka FGMka ?-Is Gudniinka Fircooniga really the correct Somali translation of FGM/C?-Soomaaliya oo keensatay Sheybaarka lagu baaro qofka qaba cudurka COVID-19-Halkee ku dambeesay gogashii dib u heshiineed ee madaxweynaha Puntland uu fidiyay?-Coronovirus oo saameyn dhaqaale ku yeeshay Kalluumeysatadii Kalluunka u dhoofi jiray Dibadda-Mareykanka oo wajahayaha xaaladii ugu xumeyd ee Coronovirus-Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo ku baaqay in si deg deg ah lagu joojiyo colaad Beleedyada dalka
Midowga Africa oo mar kale ka hadlay xiisadda Somalia iyo Kenya
Guddoomiyaha Gudiga Midawga Afrika, Moussa Faki Mahamat ayaa walaac ka muujiyay Xiisadda Siyaasadeed ee soo laablaabatay ee Kenya iyo Soomaaliya.
Gudoomiyaha wuxuu ka codsaday dhamaan daneeyayaasha inay xasiliyaan Xiisadda oo ay xakameeyaan, kuna dhiiri galiyo labada dal inay khilaafaadkooda ku xalliyaan wadahadal.
Waxaa uu sheegay in Midowga Afrika, oo kaashanaysa Beesha Caalamka uu sii wadi doonaan inay si dhaw ula socdaan xaaladda labadda dal si looga baaqsado in Khilaafka sii xoogeysto.
Guddoomiyuhu wuxuu mar kale xaqiijiiyay u diyaar ahaanshaha Ururka Midowga Afrika si loo taageero labada dal in ay yeeshaan wadahadal wax ku ool ah oo lagu horumarinayo nabadda, xasilloonida iyo deris wanaagga, iyada oo la waafajinayo astaamaha iyo mabaadi’da Midowga Afrika.
Labadii bilood ee lasoo dhaafay dowladdaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa eedeymo kala duwan hawadda isku marsiiyay ka dib markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay in ay Kenya ay faragalin ku heyso arimaha gudaha Soomaaliya.
Puntland oo faahfaahisay shir dhawaan ka furmi doona Garoowe
IRAN: Xildhibaankii Labaad Ee U Dhinta Caabuqa Coronavirus
Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh oo ku baaqay in si deg deg ah lagu joojiyo colaad Beleedyada dalka